Madaxweynaha Galmudug oo ku dhawaaqay in dagaal mideysan lagu qaado Al-Shabaab – Geelle Magazine
Madaxweynaha Galmudug oo ku dhawaaqay in dagaal mideysan lagu qaado Al-Shabaab
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor) ayaa uga tacsiyeeyay Maamulka Puntland iyo guud ahaan shacabka reer Puntland geerida ku timid Guddoomiyihii Gobolka Nugaal Marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gujir), wuxuuna Alle (SWT) caafimaad deg-deg ah uga baryey dhammaan dadkii ku waxyeeloobay falkaas wuxuushnimada ah.
“Aniga oo ku hadlaya Magacayga iyo kan Shacabka Galmudug waxaan tacsi tiraanyo leh u dirayaa Dowlada iyo shacab weynaha Puntland oo aan uga tacsiyeynayo geerida Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Marxuum Cabdi Salaam Xasan Xirsi. Waxan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa Ehelkii iyo Qaraabadii uu ka baxay marxuumka. Rabbi Naxariistii Janno ha ka waraabiyo.” Ayuu yiri Madaxweyne Qoor-Qoor.
Sidoo kale, Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor) ayaa si xooggan u cambaareeyay qaraxaasi, Waxaana uu ku baaqay in si wadajir ah loola dagaalamo Ururka Al-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya.